Flex pcb - China Shenzhen Wonderful Technology
Usazviomesera akadhindwa redunhu mapuranga nokunakidzwa zita ravo nemano avo dzinoita hushande kuti akagadzirirwa kuti aenderane wemagetsi kana chigadzirwa, kusiyana kuvaka mudziyo kuti aenderane ne redunhu bhodhi. Flex mapuranga vari dzinoratidzwa rakadhindwa hushande uye chikamu urongwa zvakajeka hwakarongwa pachena ne nyore kufurirwa nechimwe zvinhu.
Kudzidza Advantages Vakawanda Flex Circuit Boards
Usazviomesera akadhindwa redunhu mapuranga kupa vanoverengeka uchabatsirwa kusanganisira:
• Saving Space : Flex pcb magadzirirwo inoda chete vanenge 10 muzana nzvimbo uye uremu ane the wired redunhu puranga gungano, nezvipiriso mukuru chokugadza kavha rusununguko. The yokusafa mukana wokushandiswa zvakare anobvumira tighter vanobwembura nezvaanogona.
• Maximum kuvimbwa : A kusanduka akadhindwa redunhu bhodhi kunoda interconnects zvishoma, izvo zvinozoita zvinoda zvishoma kuonana crimps, connectors uye solder majoini. Zvichitaurwa zviri nyore, aida kuchinja pcb bhodhi harina vazhinji zvinogona manyuko kuti kukundikana, izvo kunonatsiridza kuvimbika kwavo.
• Enhanced nezvaanogona : The kusanduka pcb inowirirana chero mhando connector kana chikamu uye anoshanda zvakanaka mikana yakadai ZIP connectors. Ivowo kuita zvakanaka zvikuru muna tembiricha akanyanyisa uye kupa mukuru kuramba nemwaranzi uye nemakemikari.
• Cost mari : Cost-okuponesa zvakanakira nematunhu kusanduka akadhindwa anosanganisira akaderedza zvinhu uye kavha zvinodiwa, mativi ezasi yokutsiva yokufambisa uye zvinoderedza paungano zvikanganiso kuti aigona zvimwe kuguma kudiwa navatengesi.
Vose vanobatsirwa izvi kuti flex vematunhu mapuranga Zvakanakisa akakodzera kuti siyana mafomu mumaindasitiri akadai Military, Transportation, Medical, Consumer Electronics, Automotive, Aerospace, Communications uye Industrial.
At Wells, isu dzidzira mu azoshandiswa uye ungano kusanduka akadhindwa redunhu zvigadzirwa zvokushandisa kugadzira zvokurapa mano uye-siyana telecommunication uye mumaindasitiri michina. Tsika pcb yedu kugadzira nezvaanogona achibvumira kuti tive uye kubereka pamusoro-achiita flex pcb rinonangana rakasiyana zvinodiwa zvenyu. Tinogonawo kushanda nemi kuti pave netsika flex pcb kumumvuri kuti zvichaita yekudyidzana kuvandudza tarisiro dzako rakabudirira chirongwa mugumisiro.
Uwandu germinales 1-8layers
Order Quantity 1pc-10000 + bv
Vakai Time 2days-5weeks
zvinhu Dupont PI, Domestic Shengyi PI
Board Size Min 6 * 6mm, Max 406 * 610mm
Board ukobvu 0.6mm-2.0mm
Copper Weight (Finished) 0.5oz-2.0oz
Min achiritara nechokuenzanisa / Spacing 3mil / 3mil
Solder Mask mativi Sezvo pa faira
Solder-vanorega unhani-Soldermask mafuta Green, White, Blue, Black, Red, Yellow
Solder-vanorega unhani-Coverlay PI uye PET firimu
Silkscreen mativi Sezvo pa faira
pamusoro Finish HASL-Hot mhepo solder munoenzanisa
Kutungamirira isina HASL-RoHS
Min Drilling Hole dhayamita 8mil
Min. Buri saizi-Drilling (PTH) 0.2mil
Min. Buri saizi-Punching (NPTH) 0.5mil
Kubvumidza kuti divi ± 0.05mm
Other Techniques Peelable solder chifukidzo
Stiffener (chete PI / FR4 substrate)
Our High-Quality Zvichienderana pcb Manufacturing Process
A chikonzero chikuru nei Wells zvinowanzodavirwa anoonekwa somunhu pamusoro pcb mugadziri ndiyo yedu kusingazununguki kuzvipira unhu. Chikwata dzedu macheki mumwe magadzirirwo uye anotora nguva kuongorora newe asati kugadzirwa. Izvi zvinoita redunhu Magadzirirwo takagadzirira mukugadzira, uye mapuranga ako achanunura waivako yaungatarisira. We hunovimbisa madzidziro atinoita flex pcb nhengo uye zvinoriumba.
Welcome kunotora customized flex pcb zvedu nemazvo vagadziri uye bhizimisi. Kuburikidza kunyatsoteerera kugadzira muitiro, tinogona chokwadi iwe pamusoro yepamusoro uye yakakwirira kunyatsoshanda wedu flex pcb. Ndapota kusununguka kutaura fekitari yedu.
Zvichienderana Circuit Board
Zvichienderana Circuit Board Manufacturers
Zvichienderana Printed Circuit
Zvichienderana Printed Circuit Board
Fpc Zvichienderana Printed Circuit
Green Zvichienderana pcb
LCD Ratidza Zvichienderana pcb
4L Flex bhodhi
2L Flex bhodhi
tefa PCB mugadziri
6L + 2L Flex & Hazvichinji-chinji bhodhi